Notànana tao amin’ny seranam-piaramanidin’i Islamabad ilay Pashtun mpiaro ny zon’olombelona ary navotsotra taorian’ny faneren’ny media sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2018 14:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Ελληνικά, Français, English
Gulalai Ismail nandray fitenenana nandritra ny TEDxExeter 2017 tao amin'ny Teatira Exeter Northcott any Exeter, Fanjakana Britanika ny zoma 21 Aprily 2017. Sary tao amin'ny Flickr nalain'i Matt Round tao amin'ny Matt Round Photography. CC BY NC ND 2.0
Nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Islamabad tamin'ny 12 Oktobra i Gulalai Ismail, ilay Pashtun mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona sady mpanorina ny tambajotra Seeds of Peace [Voam-pandriampahalemana], raha iny izy tonga tamin'ny fiaramanidina avy any Londra iny.
Raha vao tonga izy dia nosamborin'ny Sampan-draharaha Federaly Misahana ny Fanadihadiana (FIA) ary nohadihadiana nandritra ny adiny valo. Nolazaina izy fa ao amin'ny Lisitry ny Fanaraha-maso eo am-pivoahana izay mametra azy tsy handeha any ivelany ny anarany.
Navotsotra tamin'io andro io ihany izy, taorian'ny fanerena goavana tao amin'ny tambajotra sosialy avy amin'ireo antoko liam-pandrosoana, ny fikambanana feminista sy ny vondrona hafa.
Vondrom-poko vitsy an'isa izay mipetraka any Pakistana sy Afghanistan ny ankamaroany ny Pashtuns. Mitohy ny fandrahonana ny Pashtuns amin'ny fanavakavahana sy ny herisetra ary nafindra toerana noho ny fifandonana teo amin'ny tafika sy ny mpitolona mitam-piadiana Taliban ny dimy hetsy tamin'izy ireo. Tamin'ny taona 2016, nomena alalana ofisialy hiverina any amin'ny taniny any amin'ireo Faritra Federaly Tantanan'ny Vondrom-poko ao Pakistana ny Pashtuns, saingy nanakana ny maro tamin'ny fiverenana azo antoka ny fvanja milevina naparitaka tao an-toerana.
Ny Hetsika Pashtun Tahafuz (Fiarovana) , hafohezina amin'ny anarana hoe PTM dia lasa sehatra hfivorian'ny olona an'arivony mba hilazana momba ireo tsy rariny ireo. Mpikambana mavitrika ao amin'ny hetsika i Gulalai .
Vakio bebe kokoa: Mitaky ny Rariny ny Diabe Lavitra Nataon'ny Pashtun Taorian'ny Taona Maro Nanenjehana ny Foko
Iray tamin'ireo olona miisa 19 voatonona tao amin'ny tatitra fitarainana voarain'ny mpitandro filaminana noho ny fanomanana sy ny fitenenana nandritra ny fihetsiketsehana PTM tao amin'ny tanàna avaratra andrefan'i Swabi, ao amin'ny faritanin'i Khyber Pakhtunkhwa ao Pakistan tamin'ny 12 Aogositra i Gulalai . Ahitana “fivoriana tsy ara-dalàna”, “sazy noho ny fanakorontanana” ary “sazy noho ny fifehezana tsy ara-dalàna” ny fiampangana ireo mpikatroka ao amin'ny PTM.
Nisioka i Rafiullah Kakar, mpanolo-tsaim-bahoaka amin'ny politika Pashtun hoe:
Raha navotsotra i Gulalai dia mbola misy mpikatroka miisa 9 notanana noho ny fanampiana ny fikarakarana fivoriana PTM tao Swabi.
Faiz Mohd Kaka ny iray amin'izy ireo. 85 taona izy ary iray amin'ireo mpikambana vitsy mbola velona ao amin'ny Khudai Khidmatgar Tehreek. Mahamenatra!
Namoaka fanambarana rakipeo tao amin'ny WhatsApp i Gulalai izay milaza fa nosamborina izy noho ny “fanandrata-peo ho an'ny zon'ny sivily sy ny fananganana fandriampahalemana” ary ny “fandraisana anjara tamin'ny PTM Jalsa (fivoriana) tany Swabi (tanàna niaviany)”.
Hoy izy tao amin'ny fanambaràny :
Ohatra iray amin'ny fomba hampihenan'ny fanjakana ny toerana ho an'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena ity. Mihena ny toerana ary nakatona ny sehatra ho an'ny feon'ny sivily, ireo feo izay mitaky ny fandriampahalemana. Miresaka momba ny fananganana fandriampahalemana isika … Tsy fanafihana an'i Gulalali Ismail, na PTM izany. Fanafihana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. Fanafihana ny fahafahantsika miteny izany. Fanafihana ny fahalalahana maneho hevitra izany. “
Niparitaka toy ny afo tsy voafehy tao amin'ny media sosialy ny vaovaon'ny fisamborana an'i Gulalai. Nisy ny sioka sy hafatra momba ny firaisankina niaraka taminy avy amin'ireo vondrona liam-pandrosoana tao amin'ny firenena sy tany ivelany.
@Gulalai_Ismail navotsotra taorian'ny fanadihadiana nataon'ny FIA nandritra ny 8 ora. Niresaka tamin'ny @24NewsHD izy taorian'ny famotsorana azy.
Nanao fanentanana ho famotsorana ahy tao amin'ny media sosialy ireo namana sy ny mpiara-miasa aminay avy amin'ny Antoko Fiaraha-mitantan'ny Vehivavy Demokratika, Antokon'ny Awami Mpiasa ary ny PTM. Satria tsy rariny ny fanagiazana ny pasipaoron'ny olom-pirenena noho ny fanandratany ny feony ho an'ny zon'olombelona. Saingy nampiseho ny andro androany fa andron'ny herin'ny vahoaka androany- nanao ny fanerena ny tanora sy ny mpiasa … fa tsy afaka nanakana ny mpiasany (ny governemanta) …natsangan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny media sosialy izany ary tamin'ny alàlan'ny fandehanana tany amin'ny biraon'ny FIA ihany koa.
Nisioka i Tooba Syed, mpampianatry ny Oniversite mikasika ny fanabeazana momba ny lahy sy vavy, sady Sekreteran'ny Serasera ao amin'ny Antoko Fiaraha-mitantan'ny Vehivavy Demokratika hoe:
Navotsotra i Gulalai ismail. Arahabaina isika rehetra!
Raha mbola notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina izy dia namoaka fanambarana ny Amnesty International izay nilaza fa tokony hamoaka avy hatrany tsy misy fepetra an'i Gulalai Ismail i Pakistana .
"Instead of trying to silence human rights defenders, the new government must work to create a safe and enabling environment for those who raise their voices for justice,” said Rabia Mehmood, South Asia Researcher at Amnesty International. @Rabail26 #PTM #Pakistan #ReleaseGulalai
“Tokony hiasa amin'ny fananganana tontolo iainana azo antoka sy miroborobo ho an'ireo izay manandra-peo ho amin'ny rariny ​​ny governemanta vaovao fa tsy miezaka manampim-bava ny mpiaro ny zon'olombelona ,” hoy Rabia Mehmood, mpikaroka ao Azia Atsimo ao amin'ny Amnesty International.
Women Democratic Forum, a Pakistani based leftist feminist political collective of women also issued a message of solidarity with Gulalai.
Namoaka hafatra ho firaisankina amin'i Gulalai ihany koa ny Fikambanan'ny Vehivavy Demaokratika izay fikambanam-behivavy mpanao politika feminista elatra ankavia Pakistaney .
Manameloka mafy ny fisamboran'ny FIA an'i @Gulalai_Ismail mpikambana ao amin'ny WDF KP sady fantatra ho mpikatroka feminista izahay. Nahare vaovao izahay fa natolotra ny polisy Swabi tao amin'ny Swabi PTM jalsa FIR izy. Mitaky ny famotsorana avy hatrany an'i Gulalai izahay
Nisioka i Bushra Gohar, mpikambana ao amin'ny Antenimieram-Pirenena teo aloha sady filoha lefitry ny Antoko nasionaly Awami hoe:
Tohina raha nahare fa nosamborin'ny #PuppetGovernment i #Gulalai_Ismail noho ny fanandrata-peo ho an'ny zon'ny #Pashtun. Manameloka mafy an'io fihetsika kanosa io izahay ary mitaky ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro. Miatrika fandrahonana ao #Pakistan ireo mpikatroka ny zon'olombelona.
Taorian'ny famotsorana an'i Gulalai, nisioka i Rabia Mehmood, mpikaroka ao Azia Atsimo ao amin'ny Amnesty International:
Faly raha nahafantatra fa navotsotra i @Gulalai_Ismail noho ny raharaha PTM Swabi Jalsa. Nefa mbola ao anatin'ny Lisitry ny Fanaraha-maso eo am-pivoahana ihany ny anarany ary nogiazan'ny FIA ny pasipaorony. Tokony hamarana ity fampitahorana tsy mitsahatra atao amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona ity ireo manampahefana Pakistaney .